Haayadaha amaanka gobolka Bari ee Puntland oo soo bandhigay saddex sarkaal oo Al-Shabaab ah - Puntland Mirror Believable Media Website
HomeSomaliaPuntlandHaayadaha amaanka gobolka Bari ee Puntland oo soo bandhigay saddex sarkaal oo Al-Shabaab ah
August 20, 2016 Puntland Mirror Puntland, Somalia 0
Saddexda sarkaal ee katirsan kooxda Al-Shabaab oo lasoo bandhigay.
Boosaaso-(Puntland Mirror) Haayadaha amaanka gobolka Bari ee Puntland ayaa maanta oo Sabti ah soo bandhigay saddex sarkaal oo Al-Shabaab ah kuwaasoo ciidamada ay kusoo qabteen howlgalo ka dhacay gobolka Bari, sida ay sheegeen saraakiisha dowlada.
Saraakiisha lasoo qabtay oo katirsan kooxda Al-Shabaab ayaa magacyadooda yihiin, Axmed Aadan Cabdulaahi, Muuse Aadan Maxamed iyo Cabdulaahi Ibraahim.
Guddoomiyaha gobolka Bari Yuusuf Maxamed Wacays oo saxaafada la hadlay ayaa sheegay in saddexda sarkaal ee Al-Shabaab katirsan dhawaan la hor-geyn doono maxkamad.
Bishii lasoo dhaafay ee Juun, maxkamad Puntland ah ayaa 43 xubnood oo Al-Shabaab ku xukuntay dil toogasho ah kadib markii maxkamada ay ku heshay in ay ka qaybgaleen dagaalkii ciidamada dowlada Puntland iyo maleeshiyada Al-Shabaab dhexmaray bishii Maarso ee sanadkan.
October 5, 2016 Puntland oo 26 maxbuus oo Al-Shabaab ah ku wareejisay dowlada federaalka Soomaaliya
November 20, 2016 Maxkamada ciidamada Puntland oo labo xubnood oo Al-Shabaab ah ku xukuntay dil toogasho ah
October 25, 2016 Kalafadhigii 38-aad ee baarlamaanka dowladda Puntland oo dib u dhac ku yimid
Garoowe-(Puntland Mirror) Wasaaradda Maaliyada Puntland ayaa maanta oo Arbaco ah xariga ka jartay dhismaheeda cusub ee magaalada Garoowe. Munaasabada xarig jarka oo lagu qabtay dhismaha cusub ee Wasaaradda Maaliyada ayaa waxaa kasoo qeybgalay masuuliyiinta sare [...]
Xaaska ninkii qoriga watay kaasoo 49 qof ku dilay baar ay leeyihiin raga isku-tagga oo ku yaala magaalada Orlando ee Maraykanka ayaa la maxkamadaynayaa iyadoo lala xiriirinayo weerarkaas, sida ay sheegayaan warbixinada. Xeer ilaaliyaasha ayaa [...]
Somaliland oo toogasho ku fulisay xubno katirsan Al-Shabaab markii ugu horeysay
Hargeysa-(Puntland Mirror) Maamulka Somaliland ayaa maanta oo Arbaco ah toogasho ku fuliyay lix qof oo loo haysto dambiyo kala duwan, sida ay sheegeen ilo-wareedyo dhanka ammaanka katirsan. Labo kamid ah lixda nin ayaa lagu eedeeyay [...]